ကျန်ခဲ့တဲ့ (၁၃) ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့သည့်ငလျင်မှာ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကဂျပန်အရှေ့ပိုင်းငလျင်ကြီးရဲ့တစ်ကြော့ပြန်ပင်ဖြစ်သည်ဟု ပညာရှင်များပြော။ - JAPO Japanese News
ကျန်ခဲ့တဲ့ (၁၃) ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့သည့်ငလျင်မှာ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကဂျပန်အရှေ့ပိုင်းငလျင်ကြီးရဲ့တစ်ကြော့ပြန်ပင်ဖြစ်သည်ဟု ပညာရှင်များပြော။
ဂါ 16 Feb 2021, 12:07 ညနေ
၂ လပိုင်း ၁၃ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီ ၈ မိနစ်လောက်မှာ၊ Fukushima စီရင်စုရဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်မှာ ပြင်းအား (M) 7.3 ရှိတဲ့ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ ငလျင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အများဆုံးငလျင်ပြင်းထန်မှု 6+ ကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငလျင်ဗဟိုချက်က ခန့်မှန်းချေ ၆၀ ကီလိုမီတာအနက်ကနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပုံရပါတယ်။
အမှန်တကယ်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ၊ ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ငလျင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာပဲ ဒီငလျင်ကြီး ၁၀ နှစ်ပြည့်မယ့် Tōhoku ဒေသကို ယခုတစ်ခါ အားပြင်းတဲ့ငလျင်ဟာ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာပြန်ပါတယ်။
Miyagi စီရင်စုZao မြို့ နဲ့ Fukushima စီရင်စု Soma မြို့တို့မှာတော့ ငလျင်ပြင်းအား 6+ ကို၎င်း၊ တိုကျို ၂၃ ရပ်ကွက်မှာလည်း ပြင်းအားအဆင့်4ကို၎င်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ နေရာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လှုပ်ခတ်မှုကိုခံစားခဲ့ရပေမဲ့၊ ငလျင်ဗဟိုအနက်ကနေ ဆူနာမီအတွက်သတိပေးချက်တွေတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။
NHK သတင်းဌာနကတော့၊ Fukushima, Miyagi နဲ့ Kanto ဒေသဘက်မှာ လူ‌ပေါင်း ၁၀၀ နှင့်အထက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
Tohoku နဲ့ Kanto ဒေသရှိ အိမ်အလုံးပေါင်း ၉ သိန်း ၂ သောင်းတို့ဟာ ၁ နာရီကြာမျှလျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းငလျင်ကြီး၏ တစ်ကြော့ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ ပညာရှင်များကသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ယခုလှုပ်ခပ်သွားတဲ့ငလျင်ဟာ ဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးတွေကိုပါခေါ်ဆောင်လာပြီး၊ လူပေါင်း ၁ သောင်း ၈၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ရသော ၂၀၁၁ ခုနှစ်ရဲ့ ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းငလျင်ကြီးရဲ့ငလျင်ဗဟိုချက်အနီးမှာပဲ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကဆူနာမီဟာ Fukushima စီရင်စုရဲ့ နံပါတ်တစ် နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံကို မတော်တဆမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အပြင်းထန်ဆုံးသော ဆူနာမီပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၃ ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ငလျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂျပန်မိုးလေဝဿအေဂျင့်စီကိုယ်တိုင်က ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းငလျင်ကြီးရဲ့တစ်ကြော့ပြန်အဖြစ်မြင်ရကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာစစ်တမ်းဌာနကတော့၊ ငလျင်ကြီးတွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးမှတစ်ကြော့ပြန်လာတတ်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
ဝန်ကြီးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး Katsunobu Kato ဟာ ၁၄ ရက်နေ့မှာ၊ အ‌ရေးပေါ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ၂ ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ဒီငလျင်ဟာ “ Fukushima ရှိ နံပါတ် ၁ နှင့် နံပါတ် ၂ နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံ၊ Onagawa နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံတို့အပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီအပြင် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်သွားခြင်းကြောင့်လည်း Tohoku ကျည်ဆန်ရထားနဲ့ Yamagata ကျည်ဆန်ရထားတို့ရဲ့ အချို့သောပြေးဆွဲမှုရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုတော့ အတည်ပြုဆဲဖြစ်ပြီး၊ အဆောက်အအုံပျက်ဆီးမှုမှာတော့ Fukushima စီရင်စု Date မြို့တွင်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီငလျင်ကြောင့်ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့၊ ဒေသခံအများအပြားဟာ မိမိနေအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီး တောင်ကုန်မြေမြင့်ပေါ်သို့‌ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီစီရင်စုမှာပဲ အင်အားပြင်းငလျင်နဲ့အတူဆူနာမီဖြစ်ဖူးတဲ့အတွက်၊ အသက် ၅၀ အရွယ်ဒေသခံအမျိုးသားကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကအတွေ့အကြုံကိုသင်ခန်းစာယူပြီး ရွေ့ပြောင်းခဲ့တာပါလို့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
မုန်တိုင်းနံပါတ် 12 ကြောင့်၊ 24 ရက်နေ့မှာ ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းကိုဦးတည်ပြီး မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမည် !!!!
နှင်းတောင်မကျသေးတဲ့ Shizuoka စီရင်စုမှာ ထူးဆန်းတဲ့နှင်းတောင်ကိုတွေ့ခဲ့ရ
ငလျင်လှုပ်တဲ့အခါ အိမ်နဲ့အဆောက်အအုံတွေမပြိုလဲတော့ဘူး ?
Tokyo, Minato ရပ်ကွက် လူနေအိမ် 1620 လုံး မီးပျက်သွားခဲ့ !!!!!!
Kyoto Animation အတွက် လှူဒါန်းလာတဲ့ အလှူငွေတွေကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ
Alcohol လက်သန့်ဆေးရေကြောင့် ဂျပန်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး လက်မီးစွဲသွားခဲ့ရ !!!
(၆)ရက်နေ့၊ တိုကျိုမြို့ကူးစက်လူနာအသစ် ၂၄၂ ဦးရှိ
စစ်ပွဲအတွင်းမှ မီးပုံပွဲ !!!!
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ lockdown ချလိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်မည့်သူ ၄၀၀၀ ‌လောက်ရှိ !!!!
Face and Neck and Decollete Care Mask